गफ ! .....: मतला बिहिन गजल : जिउँदै रहेछ
Posted by दीपक जडित at 3:56 AM
कस्तो गाह्रो काफिया प्रयोग गर्नु भएको हो! शब्द बन्ने जत्ती सबै तपाईले हालिसक्नु भयो, अब यो बाहेक अर्को के शब्दको काफिया राख्‍ने??
तपाईले त नसके पछि हाम्रो के लाग्ला र ? तैपनि सोच्दै छु है, केहि फुरेमा पक्कै लेखौंला ।
च्यालेन्जै भयो है साथिहरु! सबैजनालाई !!
म त रुन मात्रै सक्तिन दिपक जि ! तपाईंको गजल पढेर ।
तपाईंलाई कसरी रोमान्टिक बनाउने हो खै ! फेरी पनि तपाईंको न्यास्रो लाग्छ अनी यसो " मेरो साहित्य संसार " मा आउछु अनी उस्तै ! मन रुबाउने गजल ।
यस्को मतलब दिक्क लाग्यो भन्न् खोज्या होइन है , दिक्क लाग्ने भए आउने थिन , रुन मन लाग्यो भन्न् खोज्या । कम्से क म् थोरै रोमान्टिक त भाईदिनुस् कहिले काही ! मेरो मतलब - क मन यार ! लेट्स इन्जोय द लाइफ !
बि सेक्सी म्यान ! नट अ साधु !
मेरो मतलब फेरी पनि 'फिल द लाइफ ' !
तपाईं म सँग नरिसाउनुस् है दिपक जि !!! तपाईंलाई तपाईंको कुरा लेख्ने अधिकार छ , मलाई ( म पाठक ) मेरो कुरा भन्ने अधिकार छ ।
शुभ कामना है हिर्दय देखी नै २००९ को , तपाईंको गजल - गीत - कबिता - कथा - लेख समय समय मा पढ्न पाइयोस - तपाईंको भाबना नजिक बहकिन पाइयोस ।
'टाउको' नभएपनि सुन्दर छ दीपकजी यो गजल! प्रयोग गरिएका विम्वहरु अलि 'पूराना' नलाग्ने भने हैन। पहिलो शेरले देखाउन खोजेको 'धेरै दिन देखि अनिँदो' हुनु र 'जिउँदै' हुनुको बीचको विरोधाभाष त्यति बुझ्न सकिन। दोश्रो र तेश्रो शेर दामी छन्। चौथोमा, 'सिला खोज्नु' को साटो अरु केहि राख्ने हो कि? किनकि फाटेको सपना हराईसकेको भने पक्कै हैन होला, शायरसंगै छ होला अझै।
पहिले त प्रतिक्रियाको निम्ती धन्यवाद सबैलाई ।
दिलीपजी , मैले त गुहार गरिसकेकै हो । यस्तो बेलामा हामी शब्दमा गरीब पो भएछौं रहेछौं जस्तो लाग्ने ।
लुनाजी , म दुखी बनेर हेर्न सक्छु तर दुखि छैन . मलाई त बडै रोमान्टिक छु जस्तै लाग्छ सायद पत्र पत्र अनुभुतिले भरिएको जिन्दगी जिएर होला । धन्दा नमान्नुस् म साधु भन्न लायक पनि छैन । ठिक्क मान्छे जस्तै छु ।
पहिलो शेरको बारेमा केहि कुरा खोलुँ है त । मैले यो लेख्न शुरु गरेकै त्यही पहिलो शेरबाट हो अन्य कतिपय बिचबाट पनि लेख्ने गर्छु । त्यसबेला जगजित सिँको गजल कम्प्युटरमै बजाएर पोखिएलाझैं कानमा ठोसेको थिएँ । बज्दै थियो - 'सुना है बन्द करली उसने आँखे कई दिनों से वो सोया नहिँ था.....' त्यसैबेला निक्कै अन्तराल पछि अनलाईनमा भेटभएको साथीले 'हैन कता बेपत्ता हो ? अझै जिउँदै हो ?' भनेर उसकै शैलीमा म्यासेज ठोक्यो । संयोग कस्तो परेछ भने म अघिल्ला केहि रात ज्यादै कम सुतेर अनिँदो पनि थिएँ । त्यसैले जिउँदैलाई ट्याप्प समातेर अनिदोको आफ्नै कहानीमा मुछेर यो पहिलो शेर धस्काएँ । त्यसपछि अरु थपेँ । अब अनिँदो हुनु र जिउँदै रहनुको अन्तर सम्बन्ध भनुँ या विरोधाभाष भनुँ केलाएर हेर्नुपर्दा मैले लेखेको अवस्था भन्दा निक्कै पर जान्छ । मैले यसलाई यसरी हेरेको छु । त्यो - त्यो कोहीपनि हुनसक्छ । ज्यादै मर्माहत अवस्थामा रहेर झुपुक्क निदाउन समेत नसक्ने स्थितीमा पुगेको । त्यसको बारेमा मैले निदाउन सक्दैन रे भन्ने बाहेक नसुनेको निक्कै भएकोछ । जब सुनेँ मैले त्यसबेलासम्म त्यसको माया मारीसकेको थिएँ । मेरो अनुमानमा त्यो अवस्थाको मान्छे मरिसकेको हुनुपर्ने तर जिउँदै रहेछ । बुझाउन यहि खोजेको हुँ तर सबैलाई यो पहिलो शेरले यसरी बुझाउन सक्ला नसक्ला त्यो अर्कै कुरा हो ।
र अन्त्यको शेरमा तपाईंले साँच्चै पकड्नुभयो मलाई । 'फाटेको'भन्नुले हराएको वा छरिएको भन्ने अलि नबुझाउला भन्ने लाग्यो मलाई पनि तर 'सिला खोजेथ्यो'लाई शट्टामा खोज्नुभन्दा 'फाटेको'लाई नै शट्टामा हाल्दा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो त्यसैले 'फुटेको' लेखेको छु । फाटेकोले चर्केको अवस्था जनायो भने फुटेकोले चर्केर पनि टुक्रिसकेको अवस्था जनाउला जुन छरिएको हुनसक्छ भन्ने ठान्छु ।
मेरो लागि त यो फलाम को
चिउरा चपाउनु सरह हो। तर अन्य
स्रस्टाहरुले पक्कै पनि टाउको लेख्न
सक्नुहुनेछ। दीपक जी को यो गजल
लेखाइ को खदाइ बेजोड को छ भन्दा
दीपकजी धेरै बाठो मान्छे, पर्याप्त शब्दै नभएको काफिया लिएर गजल लेख्न गुहर माग्ने । दिलीपजीको कुराम सोह्रै आना सम्मति जनाउँदै यो चुनौती सम्भव भएसम्म चाँडै सुल्झाउने प्रयास गर्नेछु ।